Izindaba - Amaphoyinti amathathu wokulawula isitampu esishisayo esinezici ezintathu nokwelashwa kokukhubazeka
Amaphoyinti amathathu wokulawula isitampu esishisayo esishisayo kanye nokwelashwa okwenziwe ngamaphutha
Ukunyathela okushisayo oku-ntathu kuyinhlanganisela yomphumela wokucindezela i-bump nokushaya okushisayo, okunomphumela omuhle wokulwa nomgunyathi nomphumela wobuciko, ngakho-ke isetshenziswe kabanzi. Kepha ukulawulwa kwekhwalithi yesitembu esishisayo esinamacala amathathu kuyinkinga eyinkimbinkimbi ngokuqhathaniswa. Leli phepha lichaza kafushane amaphuzu amathathu wokulawula isitampu esishisayo nokulawulwa kokukhubazeka, okuqukethwe okuyireferensi yabangani:
Ikhwalithi Yokushintshwa Okushisayo Okuthathu
Nikeza ukudlala okugcwele kuzici zento eyenziwe nge-anodised ne-plate, ukuze imishini, izinto zokwakha, imvelo, izinga lokushisa, ingcindezi, isivinini nezinye izinto nokuphrinta phakathi kokwakhiwa kwenhlanganisela enhle, ukwakheka kwebhalansi yenqubo enhle kakhulu, futhi ekugcineni kukhiqize imikhiqizo eyanelisayo enezinhlangothi ezintathu eshisayo.
I-Hot Press Edition
Uma kuqhathaniswa nepuleti elijwayelekile le-bronzing kanye ne-embossing plate, inqubo yokukhiqizwa kwepuleti lokushisa elenza ngakuthathu isebenzisa indawo efanayo, futhi kukhona umehluko ophawulekayo. Ngoba ukunyathela okushisayo okunentathu-ntathu kuyisitampu esishisayo noma cindezela i-bump ukuqedela inqubo, ngakho-ke inguqulo eshisayo eshisayo kunamazinga wekhwalithi wepuleti ashisayo alula kakhulu, izidingo zokwenza amapuleti zinzima kakhulu, inqubo iyinkimbinkimbi kakhulu. , ngokwesibonelo, uhlobo olujwayelekile lwe-bronzing lwaphansi olufa luyisicaba, akudingeki ukuthi lwenziwe ngokukhethekile, nokugxotshwa okushisayo okuthathu ngenxa yokwakha iphethini yokusiza enezinhlangothi ezintathu, ngakho-ke inguqulo yayo eshisayo kakhulu yaphansi ifa kufanele kube nehlobo elishisayo elihambisana ne-male moldpresspress, okungukuthi ingcindezi eshisayo engxenyeni yekhefu ezansi ifa kufanele iphakanyiswe, futhi ukuphakama kwamaqhubu nengcindezi eshisayo kufana nenguqulo yokujula kwekhefu.
Ikhwalithi ephezulu yokushaya isitampu esishisayo yisisekelo esibalulekile sokuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo yokushaya eshisayo enezinhlangothi ezintathu. Uhlobo lokucindezela olushisayo kufanele lwenziwe ngezinto zensimbi ezisezingeni eliphakeme, ngokuvamile ezenziwe ngepuleti lethusi ngokuqoshwa kwe-laser. Insimbi engagqwali ibuye ibe ukukhiqizwa kwenguquko eshisayo yento enhle kakhulu, ngenxa yendawo yayo ebushelelezi kakhulu, uma iqhathaniswa nenguqulo yethusi, insimbi engagqwali eshisayo eshisayo yokushiswa kombhalo oshisayo nokucaca kuphakeme, umphumela we-concave ne-convex ingcindezi nayo ingcono.
Ngoba inguqulo eshisayo yokucindezela isebenza ngaphansi kokushisa okuphezulu nokucindezela okukhulu, ukukhubazeka okuncane okungabonakali ngaphansi kwezimo ezijwayelekile kungaba nomthelela omkhulu kwikhwalithi yomkhiqizo. Ngakho-ke, kunguqulo eshisayo ecindezelayo yokulawulwa kwekhwalithi kufanele ilwele ukwenza kahle, ukuze kuqedwe inkinga esezingeni elifihliwe evela emthonjeni.
Ngokuvamile, inguqulo ecindezelayo eshisayo kufanele ibe ukulingana okufanayo, iphethini, umbhalo oqoshiwe ocacile, ukujula okungaguquguquki; Ngezansi kufa kufanele kube flat ngaphandle imihuzuko, ubukhulu efanayo, akukho ngokuhlaziya, egcwele ubunzima; Uhlobo olucindezelayo olushisayo nokufa kwangaphansi akunakubonakala ku-deformation eye eye, ukuwa, amabhamuza, ama-burrs nokunye ukukhubazeka.
Ikhwalithi ye-anodized ngqo inquma ukuvela kwemikhiqizo yokushaya ngakuthathu eshisayo. Ikhwalithi efanelekile ye-aluminium anodized akufanele ibe nezindawo ezisobala ezikhanyayo, amabala amnyama noma umthungo wepuleti ye-laser, ungqimba oluvikela ngaphezulu lubushelelezi futhi lubonakale, akukho mkhuba nenkohliso. Lapho ukuhlolwa kokukhanya kwe-anodized, akufanele kube khona izindawo ezibonakalayo ezimhlophe, izindawo ezingcolile, amabala we-glue, izimbobo zesihlabathi nokunye ukukhubazeka kwekhwalithi.
Ngaphezu kokusebenza kokubukeka, ukusebenza okushisayo okufanelekile kwe-aluminium oxide nakho kubaluleke kakhulu. Ingesinye sezici ezinqumayo ezithinta ikhwalithi yesitembu esishisayo, futhi ukunamathela kwayo, amandla wokuxebuka nokumelana nomthelela kunqunywa ngqo ukusebenza kwayo okushisayo. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi i-aluminium engcono kakhulu ye-electrochemical ingakhombisa ukusebenza okuhle kakhulu, akumele kukhethwe ngokucophelela iphepha, uyinki, uwoyela omncane, ukumbozwa kwamakhemikhali, okufana ne-varnish futhi kubhekane nemingcele yenqubo eshisayo njengokushisa, isivinini, ingcindezi yokusetha okunengqondo , Kufanele futhi izame ukushisa ngaphambi kokukhiqizwa kwenqwaba, ukuze kuqinisekiswe isivuno lapho kukhiqizwa ngobuningi.
Ngaphezu kokuqinisekisa izakhiwo zoku-ayina ezifanele ze-aluminium eyenziwe ngophawu loku-ayina ngecala, izinsimbi ezikhethekile noma itheyiphu nayo kufanele isetshenziselwe ukuvivinya amandla ecwecwe, ukumelana nomthelela nezinye izakhiwo ze-aluminium anodized. Uma amandla we-peel ye-aluminium anodized mancane kakhulu, kwinqubo eshisayo yokufaka isitampu kungabonakala sengathi ilahla i-aluminium noma idlulise izinkinga ezingezinhle; Ngokuphambene nalokho, i-anodized kunzima ukuyidlulisa ngokuphelele, ukunyathela okushisayo akuveli kunephutha lekhwalithi. Uma ukumelana nomthelela kwe-anodize kukubi, inkinga yokuphonsa i-aluminium izokwenzeka ngenkathi kucindezelwa i-concave ne-convex, futhi ukusebenza komkhiqizo ophelile yingxenye engashintshi futhi elimele eshisayo yokushaya isitampu. Ngakho-ke, isilinganiso sokuqala sokuxazulula inqubo yokunyathela ngakuthathu ye-aluminium, engaphelele, ekhihliza amagwebu, ukwehlukaniswa kwesendlalelo nokunye ukukhubazeka kwekhwalithi ukuqonda ngokugcwele izakhiwo ezahlukahlukene ze-aluminium anodized. Ekukhiqizweni kwesitampu esishisayo esinamacala amathathu sephakethe likagwayi, i-holographic laser anodized aluminium enezinga lokushisa eliphakeme nokumelana nomgunyathi ngokuvamile kukhethiwe. Lolu hlobo lwe-aluminium ene-anodized inamandla amahle we-peel nokumelana nomthelela, akulula ukusonteka, futhi ilungele ukusebenza okushisayo kokushaya, ngakho-ke ingaqinisekisa ngempumelelo ikhwalithi yemikhiqizo eqediwe.
Ngokungeziwe, ekubekeni ngakuthathu kokushisayo ibanga lepuleti le-anodized kumele lingaguquguquki, alikwazi ukweqa iphutha lepharamitha lesethiwe (iphutha <0.1mm). Ngoba kusibalo esishisayo sokunyathela, ibanga lepuleti njengendawo yokulandelela iso le-laser, noma ngabe kunephutha elincane kuphela, ngemuva kokucindezela okuningi okushisayo, iphutha eliqoqekayo lizomangaza impela, kwesinye isikhathi lize lifike emashumini amasentimitha, kubangele Imfucuza eminingi, ngakho-ke ibanga lepuleti le-anodized kufanele lilawulwe ngokuqinile.
Enqubweni yokukhiqiza eshisayo enezinhlangothi ezintathu, kusuka “kushisayo” kanye “nengcindezi” izici ezimbili zokulawulwa kwekhwalithi, ukugwema ukunamathela okungahambi kahle, ukudonsa emuva kukayinki, ukunyathela okushisayo akuyona ukukhubazeka kwekhwalithi ephezulu; Ukwelula i-aluminium oxide yokunamathisela ukuncibilika okushisayo noyinki, i-varnish, i-varnish phakathi kobudlelwano obusondelene; Futhi udinga ukusetha amaphoyinti wokulawula ikhwalithi emshinini wokuphrinta, unake kakhulu inani likayinki, umphumela wokomisa u-inki, inani lokufafaza impuphu kunqubo yokucindezela eshisayo, nokulawula okuqinile, ukuxazulula izinkinga zekhwalithi ngesikhathi esifanele.
Kumthethonqubo wokushisa njengephuzu eliyisihluthulelo lokulawulwa kwekhwalithi eshisayo enezinhlangothi ezintathu, ukulawula okuqinile kwesikhathi sokushisa, nokuqinisekisa ukuthi izinga lokushisa liyakhuphuka, uhla lokuwela nesivinini esishisayo sokugcina ukuvumelanisa. Inani lokunamathisela okunamathiselwe kwe-hot anodized hot lincane kakhulu, ngakho-ke uma lithola ukuphambuka okuncane ekushiseni okushisayo okushisayo, kuzothinta ngqo ikhwalithi yokudlulisa ye-aluminium anodized. Ngaphezu kwalokho, ukumbozwa kwensimbi anodized yensimbi yensimbi ye-aluminium nayo incane kakhulu (ubukhulu bungu-1 ~ 2μm kuphela), futhi izwela kakhulu ekushintsheni kwezinga lokushisa, ngakho-ke kufanele silawule ngokucophelela ukushisa okushisayo okushisayo.
Kepha umthethonqubo wokushisa akulula ukuwulawula, ngakho-ke kunqubo yangempela yokukhiqiza, imvamisa ngenxa yokushintshashintsha kokushisa okushisayo kanye nezinkinga ezithile zekhwalithi. Isibonelo, izinga lokushisa elishisayo liphansi kakhulu, ukuncibilika kwe-anodized hot melt akuneli, kuthambekele ekushiseni okungashisi okungaphelele, inguqulo yokunamathisela, ukunyathela okushisayo, izinwele nokunye ukukhubazeka kwekhwalithi; Lapho ukushisa okushisayo kuphakeme kakhulu, indawo engqimba ye-aluminium ene-anodized izoncibilika, kuzoba nomkhuba wokuqhakaza, kepha futhi kukhiqize ukushintsha kombala, inkungu engaphezulu, akukho isicwebezelisi se-laser nokunye ukukhubazeka kwekhwalithi. Ngaphezu kwalokho, igwebu, i-aluminium, ukuxebuka namanye amaphutha nokulawula ukushisa okushisa okushisayo kunobudlelwano obukhulu, umkhiqizi kufanele ancike ekusebenzeni okuthile kwekhwalithi yephutha ukulungisa ukushisa okushisayo okushisayo.
Ukuze wenze imikhiqizo yokunyathela eshisayo enezinhlangothi ezintathu kanye nemikhiqizo elula yokufaka ingcindezi kanye ne-convex yomphumela we-concave kanye ne-convex ofanayo, kuyadingeka ukuqinisekisa umphumela wokushisa oshisayo ngasikhathi sinye, ikhwalithi yokulawulwa kwengcindezi ye-concave ne-convex. Ngoba ukunyathela okushisayo okuma-ntathu kuqedwa ngasikhathi sinye bese ucindezela inqubo ye-concave ne-convex, usayizi wengcindezi awuthinti nje ukunamathela kwe-anodide, kepha futhi uhlobene nomphumela we-press concave ne-convex, kwesinye isikhathi kungahle kube nokuphikisana okungahambelani phakathi ezimbili. Isibonelo, ingcindezi isethwe ibe nkudlwana, ungakhuphula ukunamathela kwe-anodization ephepheni, kulungele ukugxishwa okushisayo, kepha ngenkathi kwenziwa ukucindezelwa kwephepha le-concave ne-convex iphepha kungenzeka.
Ngakho-ke, ukuze kuzuzwe umthelela wokushisa ongcono kakhulu ngesisekelo sokungagxili iphepha, kuyadingeka ukusetha ingcindezi ngokucophelela, futhi ulungise ngokunengqondo ukuphakama kwesakhiwo esishisayo sokucindezela, ukulinganisa okunembile kwe-concave ne-convex bottom die, ukuze qinisekisa ukuthi yonke inguqulo ecindezelayo eshisayo nobude bokufa obuphansi, ukuguquguquka kuyahambisana. Ngaphezu kwalokho, kepha futhi nokuhlola ikhwalithi yokulandela ngomkhondo ezansi, ikakhulukazi edayini eliphansi sekuhlonywe amashumi ezinkulungwane zezikhathi zomthelela wokumelana, ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe ukubheka izinga lokuqina nokuqina kwabaphansi, nokushintshwa okufika ngesikhathi kwaphansi okugugile
Enqubeni yokukhiqizwa kwesitampu esishisayo esinamacala amathathu, amaphutha wekhwalithi angenzeka nganoma yisiphi isikhathi, futhi adinga ukubhekelwa ngesikhathi. Phakathi kwazo, nobungqabavu bukayinki obudayisiwe buhlobene eduze nezinkinga ezinkulu kufaka phakathi ukunamathela kwe-anodized, ukudonsa emuva kukayinki, ukunyathela okushisayo, i-aluminium engaphelele njalonjalo.
Enqubeni yokukhiqiza eshisayo enezinhlangothi ezintathu, ukwehluleka kokunamathela kwe-anodized kuvame ukukhonjiswa ezicini ezimbili ezilandelayo, izizathu nazo zihlukile.
Okunye ukuthi i-aluminium ene-anodized ayikwazi ukunamathiswa ngokuqinile endaweni yokuphrinta, futhi ingahle ishaye ngokuphelele, futhi isimangaliso se-aluminium noma ukungapheleli okukhulu kuzovela lapho kudonswa iteyipu. Ekugcineni, lokhu kungenxa yokunamathela okungekuhle kwe-aluminium anodized, ngalesi sikhathi isidingo sokwenza ngcono ukusebenza okushisayo okufanelekile kwe-aluminium anodized, noma ukufaka esikhundleni i-aluminium entsha ene-anodized.
Okunye ukunyathela okushisayo ngemuva kokuthi i-aluminium ene-anodized inganamathiselwa ngokuqinile endaweni yokuphrinta, kepha kuzoba khona inki yokubuyisa emuva. Lesi simo sidalwa ukunamathela okungalungile kukayinki, futhi ukuguquguquka kukayinki nephepha nokumiswa kukayinki akuhlobene ngokuphelele nezinye izinto, ngalesi sikhathi, sidinga ukuthuthukisa inki yokuphrinta nokuzivumelanisa namaphepha, noma silungise isilinganiso sokomisa inki .
Hot Wokushaya Lose
Izizathu eziyinhloko zokushiswa okushisayo okushisayo zingokulandelayo: enye i-powder eningi kakhulu ebusweni bokuphrinta, okuyisizathu esivame kakhulu; Okubili uyinki awomile ngokuphelele kusitembu esishisayo; Okwesithathu, ubuso bengqimba lukayinki bumbozwe ungqimba lwe-varnish evikelayo, i-varnish nokunye okumbozwa nge-resin, ukuze kungabi "nokuhlangana". Ukuhlangana nokushiswa okushisayo hhayi ezinkingeni zekhwalithi, kufanele siqhubeke kusuka eqinisweni, izinkinga ezithile ukuhlaziywa okuqondile, ungasheshi ukugxisha okushisayo, ukuvimbela ukukhiqizwa kwenqwaba yezingozi zekhwalithi yemfucuza.
Isikhathi Iposi: Jul-21-2021
Ikhofi eliphrintiwe ngokwezifiso lombala wekhofi elingu-350g ibhokisi langaphandle lebhokisi